နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: ISO ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို Burn မလဲ၊ ဘယ်လို Mount မလဲ၊??
ISO ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို Burn မလဲ၊ ဘယ်လို Mount မလဲ၊??
ISO ဆိုတာ ဘာလည်းဆိုတာကနေ စကြပါစို့...ဒီတော့ ISOဆိုတာ အရှည်ကတော့ . International Organization for Standardization ပေါ့..Archive ဖိုင်အမျိုးအစားတခုပါပဲ..DISC Image အမျိုးအစားတခုလို့လည်း လူသိများပါသေးတယ်.။ သူကိုတော့ခုနောက်ပိုင်းတော်တော် များများကို ISO တွေနဲ့ပဲ ထွက်လာကြတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်... Window ခွေဆိုလည်း ISO Software collection ဆိုလည်း ISO နဲ့ တော်တော်လေးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြတာကိုတွေ့မိကြမှာပါ.။ နောက်ထပ် UDF ဆိုတာ ရှိတယ်.. ဒါဆို UDF ဆိုတာကဘာလည်း ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ.. UDF ဆိုတာကရဲ့ အရှည်ကတော့ Universal Disk Format (UDF) ပါ. ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်တော့ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတခုအနေနဲ့ Universal Image Format (UIF) ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ် Bootable ခွေ တခွေ အဖြစ် သို့မဟုတ် DVD /CD ခွေ တခွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့Format အမျိုးအစားတွေပါပဲ့.။ ‘ဒီထက်ပိုပြီး ISO ကိုသေချာ သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အကျယ်တ၀င့် တွေ့နိုင်ပါတယ်...
ISO File ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ??
ဖိုင်တဖိုင်ကို ISO လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ဥပမာ MagicISO နဲ့ လုပ်လုပ် Power ISO နဲ့လုပ်လုပ် လုပ်လို့ ရပါတယ်. ဒါဆို Power ISO နဲ့ ISO ဖိုင်တခုလုပ်မယ်ဆိုကြပါစို့. ဒါဆို Power ISO ကိုဒေါင်းလုပ်ချ ရမ်းပါ. အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ချ ဖို့ အောက်မှာပေးထားပါတယ်.. ကြိုက်တာကိုဒေါင်းယူပါ.. ပြီးရင်တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို Power ISO ထဲ့ကို စွဲထည့်ပြီး Create Image လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ့ ။ အောက်မှာ ကျွန်တော် ပုံလေးတွေနဲ့ အြ့ကမ်းဖျင်း ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။
အဆင့် ၁ …
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ISO လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ ပိုလွယ်အောင်လို့ပါ . ပြီးရင် ISO (Power ISO) ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး ဆွဲထည့်လိုက်ပါ . အောက်က ပုံလေးလိုပါ....
ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ Save ကို နိုပ်လိုက်ရင် ဘာနဲ့ Save မှာလည်းဆိုပြီးမေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို သူမှာတော့ ၃ မျိုးပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ISO လိုချင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ISO ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီး Save လိုက်ယုံပါပဲ။
အဲ့ထက်ပိုရှင်းသွားအောင် ကျွန်တော် အောက်မှာ Youtube လင့်နဲ့ ပြထားပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း မြန်မာက youtube ကြည့်လို့ မရတဲ့ လူတွေတွက် နောက်ထပ် Vimeo ကနေ တင်ပေးထားပါတယ် အောက်က Video နှစ်ဖိုင်ကို ကြည့်ကြည့်ပါ..
ကျွန်တော် အောက်မှာ Power ISO . Magic ISO .,Ultra ISO နဲ့ WinISO ကို တင်ပေးထားပါတယ် တခုချင်းဆီ လိုချင်သူတွေတွက်လည်းအစဉ်ပြေအောင် အကုန်လုံးလိုချင်သူတွေတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင် နှစ်မျိုးခွဲတင် ပေးထားပါတယ်
အကုန်လုံးလိုချင်သူများတွက် တလင့်တည်းကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
File တဖိုင်ကို ISO လုပ်ချင်တာကတော့ နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ အများကြီးတည်းက နည်းလမ်းတခုလောက်ကို သေချာသိထားရင် နောက်ထပ် ဆော့ဝဲတွေနဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံချင်းလည်းသိပ်မကွာပါဘူး. နည်းနည်းလေး ပြောင်းလဲ သွားတာကလွဲလို့ ဘာမှ သိပ်ပြီးထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမသွားပါဘူး..ဒီတော့ ISO ဖိုင်တဖိုင်ရလာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမျိုး Bootable ခွေတခွေဖြစ်အောင် burn ကြမလည်းဆိုတာကို သိဖို့ လိုလာပါပြီ .. ဒါလည်းမခက်ပါဘူး။ အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Power ISO ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Magic ISO ပဲဖြစ်ဖြစ် ရမ်းပြီး ဘမ်းလို့ ရသလို window7ဆိုရင် Window image burn ကို Build in ပါပြီးသားပါ ဒါကြောင့် မခက်ခဲပါဘူး။ ဥပမာအပေါ်က Video ထဲမှာ သတိထားကြည့်ရင် Burn ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးရှင်းသွားအောင်တော့ အောက်က Video ဖိုင်ကို ကြည့်ကြည်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို Burn ??
ကျွန်တော် ခွေဘမ်းဖို့တွက်ကိုတော့ img burn နဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။တကယ်တော့ တခုနဲ့ တစ်တခုက သိပ်မကွာပါဘူး လုပ်ပုံကိုင်ပုံက … အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ Img burn နဲ့ ခွေဘမ်းမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Image burn ကို အရင်ဆုံးသွားဒေါင်းရပါမယ်။ Freeware ပါ. ဒီလင့်မှာ သွားဒေါင်းပါ...
ဒေါင်းပြီးလို့ ရတဲ့ဖိုင်ကို ရမ်းပြီးရင် အပေါ်က ပုံလေးလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဟိုးအပေါ်မှာ ISO ဆိုတာ Image file လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး ပုံလေးထဲ့က Write image file ကို ရွေးလိုက်ပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ Source နေရာမှာ အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတာလေး ရှိပါတယ် ဒီနေရာလေးမှာ မိမိ ခွေရိုက်ချင်တဲ့ ISO ရှိတဲ့ Location ကို ရွေးပေးပါ ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ Verify ကို အမှန်ခြစ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Verify ကိုပေးပြီး ခွေရိုက်ရင် ပိုပြီး တာရှည်ခံပါတယ်။ နောက်တခုက တော်ယုံလောက် ခွေ error ကိုလည်း အမှားခံပါတယ်။ နောက်ဆုံးရွေးပေးရမှာလေးကတော့ Setting မှာ Write Speed ပါ သူ့ကိုတော့ 4x ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ့ တာရှည်ခံပါတယ် .။ အောက်က Copies ကတော့ မိမိ Copy ဘယ်လောက် ပြန်ကူးခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာပါပဲ့။ နောက်ဆုံးအားလုံး အဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အနီင်္နဲ့ မြှားထိုးပြထားတာလေးကို နိုပ်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးလို ခွေ စဘမ်းနေပါပြီ.
ဒါဆိုရင် ခွေဘမ်းတာကို အကြမ်းဖျင်းနားလည်လောက်ပါပြီ။
ဘယ်လို Mount ???
ကျွန်တော် အခုပြောပြမှာက ရှိနေတဲ့ ISO ဖိုင်ကို ဘယ်လို Mount မလဲ့ဆိုတာပါပဲ့ .. ဒီတော့ ဒါလည်း လွယ်ပါတယ် မခက်ခဲ့ပါဘူး .. Mount ဆိုတာ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ မိမိစက်မှာ CD/DVD Drive မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲ့မှာ CD/DVD Drive ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်အောင် အတု ပြုလုပ်တာပါပဲ့။ DVD Drive အတုပေါ့. အဲ့လို အတုတွေ ရှိမှပဲ့ Mount လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က ဘယ် Software က Free ရမလဲ့ တချက်ကြည့်ကြတာပေါ့။ ဒါပေ့မယ် လူကြိုက်လည်းများ အသုံးများတဲ့ ကောင်လေးတွေကိုပဲ့ ရွေးကြတာပေါ့။ . ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က Vitrual clonedrive နဲ့ Demon tool နှစ်မျိုးရှိပါတယ် Demon tool ကတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်နေရပါလိမ့်ဦးမယ် ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ Vitrual clonedrive ကိုပဲ့ သုံးကြတာပေါ့ အဲ့တော့ Vitrual clonedrive ကို ဒီနေရာကနေ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒေါင်းပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ISO ဖိုင်တိုင်းကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီး DVD Drive ထဲ့ ထည့်ပြီး ခွေရိုက်သုံးသလို သုံးလို့ ရပါပြီ။ ISO ဖိုင်ကို ထောက်ပြီး Vitrual clonedrive ကို ရွေးပေးလိုက်ယုံပါပဲ့ ။ ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင် ပိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို Mount လိုက်တော့ ဘာပိုထူးသွားလည်းဆိုတော့ DVD Drive မရှိတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ။ နောက်ထပ်လည်း အတု အယောင်အနေနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ISO ဖိုင်တိုင်းကို ခွေရိုက်ပြီးမှ အသုံးပြုလို့ ရတာတွေကိုလည်း ကျော်လွန်သွားနိုင်တာပေါ့။ ဒီလောက်ဆိုရင် Mount တက်လောက်ပါပြီ။
အောက်မှာတော့ Demon tool ကို ကျွန်တော် Crack နဲ့ ရှာပေးထားပါတယ်။ Full သုံးလို့ ရပါတယ်။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 6:43 AM
Labels: နည်းပညာ, စော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်